Iswiidhen oo ciidammo u diri doonta xeebaha Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Vg-Shipping /TT
Iswiidhen oo ciidammo u diri doonta xeebaha Soomaaliya
Kaluumeeystaha tuugg ah
La daabacay tisdag 16 december 2014 kl 14.18
Kullan wada-jir ah oo khamiistii ina dhaaftay yeesheen guddi-hoosaadyada baarlamanka ee arrimmaha difaaca iyo dibadda ayey aqlabiyad ku go'aamiyeen, marka laga yimaado xubnaha labada xisbi ee Vänsterpartiet iyo Sverigedmokraterna oo codkooda hoos u dhigey in xubnaha baarlamanka lagu dhiiri-geliyo sidii ey ku ansixin lahaayeen laba mooshin oo la xiriira howl-gallo ey qaar ka mid ah ciidammada dalkanik aga howl-geli doonaan xeebaha Soomaaliya iyo dalka Afgaanistaan, sida uu sheegay guddoomiyaha guddi-hoosaadka baarlamanka ee arrimmaha dibadda Kenneth G Forslund, kana tir-san xisbiga Socialdemokraterna:
- Wada xaajoodkii socday ayaa ku soo gabagaboobay kulankii aannu wada-jirka u yeelanney khamiistii ina dhaaftay oo ku beehneyd 11-kii bishan diseembar, halkaasina oo lagu go'aamiyey talo loo jeediyey xubnaha baarlamanku iney aqlabiyad ku ansixiyaan howl-gallada ey qaybo ka mid ah ciidammada dalku kaga howl-geleyaan xeebaha Soomaaliya iyo dalka Afgaanistaan, sida uu sheegay.
Howlaha mariineeska EU ee xeebaha Soomaaliya
Howl-gallada ciidammada mariineska waddammada xubnaha ka ah EU - Atlanta ee ka howl-gala xeebaha Soomaaliya ayaa looga gol leeyahay sidii loo sugi lahaa ammaanka xeebaha Soomaaliya. Iyada oo ciidammada Iswiidhishka ee lagau talo jiro iney qayb ka ahaadaan muddo afar bilood ah sannadka 2015 aaney tiradoodu ka badnaan 160. Hase yeeshee ey tirada tooska uga qayb qaadan doontaa tahay 60, isla-markaana haddii xaaladdu sida ay iminka tahay ka sii adkaato kor loo qaadi karo tiradaa, sida uu guddi-hoosaadku qabo in dawladda loo madax-banneeyo. Hoowlaha la dagaalanka bur-cad badeedda ayuu gun-dhig u yahay qaraar ay gaartay laanta ammaanka ee hayadda Qarammada Midoobey (QM), isla-markaana ogolaansho ka haysta dawladda Soomaaliya. Guddi-hoosaadka ayaa sidoo kale aamin-san iney weli jirto baahi aad u ballaaran ee mucaawino loo diro dalka Soomaaliya. Waana tan ka dhigtay suurtagal howlaha mariineeska ee ciidammada waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub ee ka howl-gala xeebaha Soomaaliya iyo sidii ammaankooda loo sugi lahaa.
Inkasta oo ey aad hoos ugu dhaceen falalka qafaalasho iyo isku dayga qafaalasho ee maraakiibta isaga gooshta xeebaha badweynta Hindiya, gacanka cadmeed iyo badda Cas 160, sannadkii 2011 illaa iyo toddoba sannadkii 2013 ayey haddana dhammaan xubnaha xisbiyadu ee labada guddi hoosaad ee difaaca iyo dibadduba isku raaceen in ciidammada mariineesku howlahaa gacan ka geeystaan. Waana howl loo baahan yahay in lagu tallaabsado sida uu sheegay Kenneth G Forslund, guddoomiyaha guddi-hoosaadka arrimmaha dibadda ee baarlamanku:
- Inaan qiimeeyo baahida howsheeydu maahan, laakiin weli waxaan qabaa inay jirto baahi aad u ballaaran, sida uu sheegay.
Hans Linde, af-hayeenka siyaasadda arrimmaha dibadda ee xisbiga Bidixda - Vänsterpartiet, xubinna ka ah guddi-hoosaadka arrimmaha dibadda ee baarlamanka oo xisbigiisu gacmaha ka laabtay ansixintii mooshinka ciidammada loogu direyo dalka Afgaanistaan ayaa sheegay inuu dhanka kale ku raac-san yahay in ciidammada mariineesku ka howl-galaan xeebaha Soomaaliya. Hans Linde ayaa sheegay iney jiraan doodo la xiriira sidii wax looga qaban lahaa ka kaluumeeysiga sharci-darrada ah ee ka socda xeebaha Soomaaliya, hase yeeshee aaney ciidammadan howlahoodu iminka ku jirin. Waxaa loo baahan yahay ayuu sheegay Linde, in la ogsoonaado iney saameeyn isku leeyihiin kaluumeeysiga sharci-darrada ah iyo burcad-badeed-nimadu:
- Waxaa jira xiriir toos ah ee ka dhexeeya kalluumeeysiga sharci-darrada ah iyo falalka burcad-badeed-nimo ee ka dhaca xeebaha Soomaaliya. Waxaan sidoo kale og-nahey in kalluumeeysato badan ee soomaaliyeed ey ku sugan yihiin xaalad fakhri-nimo oo aad u adag:
- Waxayna ila tahay iney jiraan dadyoow badan ee caalamka aamin-san in loo baahan yahay sidii looga hor-tegi lahaa ka kalluumeeysiga aan xeerka waafaq-saneyn ee laga wado xeebaha Soomaaliya. Si ey kalluumeeysatada soomaalidu suurtagal ugu noqoto iney ku manaafacaadaan xeebahooda, sida uu sheegay.
Hase yeeshee aaney howlahaasi aheyn kuwo iminka u yaala ciidammada mariineeska ee ka howl-gala xeebaha Soomaaliya, sida uu sheegay Kenneth G Forslund:
- Inta aan la socdo maahan howlo u yaala ciidammadan mariineeska. La dagaalanka kalluumeeysiga aan xeerka waafaq-saneyn siyaabo kale ayey tahay in loola dagaalamo, sida uu sheegay, Forslund, guddoomiyaha guddi-hoosaadka arrimmaha dibadda ee baarlamanka Iswiidhen.